ITC မှတ်ပုံတင်ကဒ်အကြောင်း | Commerce
Home » DCCA
Tue, 05/30/2017 - 05:17 -- dccaadmin
တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် လျှောက်ထားခွင့်ရှိသူများ
၁။ တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို အသက်(၁၈)နှစ်ပြည့်ပြီးသူ နိုင်ငံသားတိုင်း လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် လျှောက်ထားခွင့်မရှိသူများ
၂။ တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များ လျှောက်ထား ခွင့်မရှိပါ -
( ခ ) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတွင် တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားပြီး သောကုမ္ပဏီများမှ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ
တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်လျှောက်ထားရာတွင် တင်ပြရမည့် အထောက်အထားများ
၃။ တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်လျှောက်ထားရာတွင် အောက်ပါစာရွက် စာတမ်းအထောက်အထားများ ပူးတွဲတင်ပြလျှောက်ထားရပါမည် -
(က) တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်လျှောက်လွှာ
( ခ ) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးမှတ်ပုံတင်ကတ်ပြား ( မူရင်း/မိတ္တူ )
( ဂ ) မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားသူ နေထိုင်ရာ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထောက်ခံချက် (မူရင်း/မိတ္တူ)
(ဃ) အိမ်ထောင်စုဇယား ပုံစံ(၆၆/၆) (မူရင်း/မိတ္တူ)
( င ) သက်ဆိုင်ရာရဲစခန်း၏ ပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်းနှင့် အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ကြောင်း ထောက်ခံချက်(မူရင်း)
( စ ) သက်ဆိုင်ရာ နယ်စပ်ကုန်သည်အသင်းဝင်ကတ်ပြား (မူရင်း)
( ဆ ) ပတ်စပို့အရွယ် ဓာတ်ပုံ (၃) ပုံ
( ဇ ) ကုမ္ပဏီထူထောင်ထားခြင်းမရှိကြောင်း ဝန်ခံကတိပြုချက်
တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် စိစစ်ထုတ်ပေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
၄။ တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်အား တစ်ဖက်ပါအတိုင်း စိစစ်ခွင့်ပြု ထုတ်ပေးသွားပါမည် -
(က)မှတ်ပုံတင်လျှောက်လွှာနှင့် အတူ ပူးတွဲတင်ပြ လာသော အထောက် အထားများကို တာဝန်ရှိသူ အဆင့်ဆင့် မှသေချာစွာ စစ်ဆေးလက်ခံ ပါမည်။
( ခ )တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မှု လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးမှု မှတ်တမ်းစာအုပ်အား သက်ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအလိုက် စနစ်တကျ မှတ်တမ်းထားရှိရ ပါမည်။
( ဂ )တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မှု လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို ကွန်ပျူတာစနစ်ဖြင့် ထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။
(ဃ)မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်လျှောက်ထားသူသည် တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံ တင်လက်မှတ်ကို ကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ရေးထိုး၍ ထုတ်ယူရပါမည်။
(င) တင်ပြလာသည့် အထောက်အထားများ မှန်ကန်မှုရှိပါက သတ်မှတ်ထားသော မှတ်ပုံတင်ကြေးကျပ် (၅၀ဝဝဝ) အားနိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍဍာရန်ပုံငွေစာရင်းသို့ ပေးသွင်းစေပြီး သက်ဆိုင်ရာ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး စခန်းတာဝန်ခံမှ လက် မှတ်ရေးထိုး ခွင့်ပြုထုတ် ပေးပါမည်။ (ITCကတ်အတွက် မှတ်ပုံတင်ကြေး၊ သက်တမ်းတိုးကြေးများ၊ သွင်းကုန် လိုင်စင်ကြေးများအား ကူးသန်း/ဦးစီး၏ နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍဍာရန်ပုံငွေစာရင်း Account No သို့ပေးသွင်း ဆောင်ရွက်ရပါမည်)
( စ) ကုန်သွယ်ရေးစခန်းများအလိုက် ခွင့်ပြုထားသော တစ်ဦးချင်း ကုန်သွယ်မှု လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင် လက်မှတ် ထုတ်ပေးထားရှိမှု အခြေအနေအား ကူးသန်းရောင်း ဝယ်ရေးနှင့် စားသုံးသူရေးရာ ဦးစီးဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲရေးေ ကာ်မ တီသို့တင်ပြ အတည်ပြု ပါမည်။
တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် သက်တမ်းကာလနှင့် မှတ်ပုံတင်ကြေး
၅။ တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်၏ သက်တမ်းနှင့် မှတ်ပုံတင်ကြေး၊ သက်တမ်းတိုးမြှင့်ကြေးများကို အောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ပါမည် -
(က) မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းအား (၁) နှစ် ခွင့်ပြုပါမည်။
( ခ ) မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်းအား တစ်ကြိမ်လျှင် (၁) နှစ် တိုးမြှင့်ခွင့်ပြုပါမည်။
( ဂ ) မှတ်ပုံတင်ကြေးကို ကျပ် ၅၀ဝ၀၀ိ/ သတ်မှတ်ပါမည်။
(ဃ) မှတ်ပုံတင် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ကြေးကို (၁) နှစ်အတွက် ကျပ် ၅၀ဝ၀၀ိ/ သတ်မှတ်ပါမည်။
၆။ တစ်ဦးချင်း ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်းကို သက်တမ်း မကုန်ဆုံးမီ (၁)လ ကြိုတင် သက်တမ်းတိုးမြှင့် ခွင့်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်း အားသက်တမ်း ကုန်ဆုံးပြီးနောက် မှလျှောက်ထားလျင် ကာလအလိုက် အောက်ပါ ဒဏ်ကြေးများကို ပေးဆောင်ရပါမည် -
သက်တမ်းတိုးမြှင့် ခွင့်လျှောက်ထားသည့်ကာလ ပေးဆောင်ရမည့်ဒဏ်ကြေး
(က) သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက် (၁) လအတွင်း လျှောက်ထားလျင် ကျပ် ၅၀ဝဝ
( ခ ) သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက် (၂) လအတွင်း လျှောက်ထားလျင် ကျပ် ၁၀ဝဝဝ
( ဂ ) သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက် (၃) လအတွင်း လျှောက်ထားလျင် ကျပ် ၁၅၀ဝဝ
(ဃ) သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက် (၃)လမှ(၆)လအတွင်း ကျပ် ၃၀ဝဝဝ
(ယခင်သတ်မှတ်ထားသည့် သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားမှု နောက်ကျခြင်းအတွက် ဒဏ်ကြေးများ အား
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ (၃-၃-၂၀၁၅) ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော
စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၅/၂၀၁၅) မှ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။)
တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ပြန်လည်အပ်နှံခြင်း
၇။လုပ်ငန်းရှင်သည် ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်မဆောင်ရွက်လိုလျင် မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်ကို ပြန်လည်အပ်နှံနိုင်ပါသည်။
တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မှု လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ဖျက်သိမ်းခြင်း
၈။တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မှု လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်သည် အောက်ပါအကြောင်းများကြောင့် ဖျက်သိမ်းခြင်းခံရမည်ဖြစ်ပါသည် -
(က) သတ်မှတ် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ အတိုင်း သက်တမ်း ကုန်ဆုံးပြီးနောက်(၆)လကျော် သည်အထိ သက်တမ်း ထပ်မံတိုးမြှင့် ခွင့်လျှောက်ထားခြင်း မပြု၍ သက်တမ်းကုန်ဆုံးနေသော မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်များ။
( ခ ) တည်ဆဲဥပဒေများကို ဖောက်ဖျက်၍ ဥပဒေအရအရေးယူခံရခြင်း။
( ဂ ) စီးပွားရေးမသမာမှုများ ကျူးလွန်ခြင်းကြောင့် Black List တင်သွင်းခံရခြင်း။
တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ကိုင်ဆောင်သူမှ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခွင့် ရှိသည့်လုပ်ငန်းများ
၉။ တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မှု လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်ဖြင့် ခွင့်ပြုထားသောနယ်စပ်စခန်း အသီးသီးမှ ပို့ကုန်သွင်းကုန် လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိပါ သည် -
(က) မြန်မာကျပ်ငွေကို အခြေခံဆောင်ရွက်သော နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှု နည်းလမ်းဖြင့်သာ ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုပါသည်။
( ခ ) ဘဏ်စနစ်ဖြင့် ငွေပေးချေဆောင်ရွက်သည့် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပုံမှန် ကုန်သွယ်မှုစနစ်ဖြင့် တင်ပို့တင်သွင်းခြင်းလုပ်ငန်း ၊ Transit Trade တို့ကို ဆောင်ရွက်ခွင့်မပြုပါ။
၁၀။တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ကိုင်ဆောင်သူသည် အောက်ပါ စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရပါမည် -
(က) တစ်ဦးချင်း ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ကိုင်ဆောင်ထားသူ ကိုယ်တိုင် ပို့ကုန်/သွင်းကုန်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရပါမည်။
( ခ ) သတ်မှတ်ထားသော စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ မူဝါဒလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လိုက်နာ ရမည်။
( ဂ ) နယ်စပ် ကုန်သွယ်မှုနည်း လမ်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုထားသော ပို့ကုန်သွင်းကုန်ပစ္စည်း များကိုသာ တင်ပို့တင်သွင်းခွင့် ရှိသည်။
(ဃ) တားမြစ်ကန့်သတ် ထားသော ကုန်ပစ္စည်းများကို တင်ပို့တင်သွင်းခြင်း မပြုရ။
၁၁။ နယ်စပ် ကုန်သွယ် မှုတွင် တစ်ဦးချင်း ကုန်သွယ်မှု လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်ဖြင့် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခြင်းကို အောက်ပါ အတိုင်း ဆောင်ရွက် သွား မည်ဖြစ်ပါသည်-
(က )ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားမှုကို လူတစ်ဦး တစ်ရက်လျှင် ကျပ် ၂၀ဝဝဝ၀ိ/ (ကျပ်နှစ် ဆယ်သိန်း) နှုန်းဖြင့် (၅)ရက်စာ တစ်ကြိမ်တည်း အများဆုံးကျပ်သိန်း (၁၀ဝ)ဖြင့် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုပါမည်။
(ခ) ပို့ကုန်လိုင်စင်သက်တမ်းအား (၇)ရက်ခွင့်ပြုပါမည်။သက်တမ်းတိုးခွင့်မပြုပါ။
(ဂ) ပို့ကုန် လိုင်စင်များကို နေ့ချင်းပြီးထုတ်ပေးသွားပါမည်။ လက်ရှိလိုင်စင်ထုတ်ပေးသည့် နည်းစနစ်အတိုင်း အုပ်စုလိုက်စနစ်ဖြင့် ထုတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပို့ကုန်လိုင်စင် နံပါတ်စဉ်အား စခန်းအလိုက်၊ အုပ်စုအလိုက်၊ အမှတ်စဉ်တပ်၍ ထုတ်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
(က) သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက် ထားမှုကို လူတစ်ဦး တစ်ရက်လျှင်ကျပ် ၂၀ဝဝဝ၀ိ/ (ကျပ်နှစ်ဆယ်သိန်း) နှုန်းဖြင့် (၅)ရက်စာ တစ်ကြိမ်တည်း အများဆုံးကျပ်သိန်း (၁၀ဝ) ဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက် ခွင့်ပြုပါမည်။
( ခ ) သွင်းကုန်လိုင်စင် သက်တမ်းအား (၇)ရက်ခွင့်ပြုပါမည်။ သက်တမ်းတိုးခွင့်မပြုပါ။
(ဂ ) သွင်းကုန်လိုင်စင် များကို နေ့ချင်းပြီးထုတ်ပေးသွားပါမည်။ လက်ရှိလိုင်စင်ထုတ်ပေးသည့် နည်းစနစ်အတိုင်း အုပ်စုလိုက်စနစ်ဖြင့် ထုတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ သွင်းကုန် လိုင်စင်နံပါတ်စဉ်အား စခန်းအလိုက်၊ အုပ်စုအလိုက်၊ အမှတ်စဉ် တပ်၍ ထုတ်ပေး သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
(ဃ)တစ်ဖက်နိုင်ငံမှ တင်သွင်းမည့် စားသောက်ကုန် ပစ္စည်းများအတွက် ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဌာန (FDA)၏ ထောက်ခံချက်ပါရှိသော ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများသာ သွင်းကုန်လိုင်စင်ဖြင့် တင်သွင်းခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။
၁၂။ ခွင့်ပြု ထုတ်ပေး ထားသော ITC မှတ်ပုံတင်၊ ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် လိုင်စင်ပါ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း များနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာ ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ဆောင်ရွက် မည့်နယ်စပ် စခန်းတွင် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများ ၏လုပ်ထုံး လုပ်နည်းနှင့် အညီသတ် မှတ်ထား သည့် အခွန် အခများကို ပေးဆောင် ရပါမည်။
မှတ်ပုံတင်ကြေး၊ သက်တမ်းတိုးမြှင့်ကြေး၊ လိုင်စင်ကြေး၊ ဒဏ်ကြေးများပေးသွင်းခြင်း
၁၃။ တစ်ဦးချင်း ကုန်သွယ်မှု လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် မှတ်ပုံတင်ကြေး၊ သက်တမ်းတိုးမြှင့် ကြေး၊ လိုင်စင်ကြေး၊ဒဏ်ကြေးများအား နိုင်ငံတော် ဘဏ္ဍဍာရန်ပုံငွေစာရင်းသို့ ပေးသွင်းရပါမည်။
၁၄။ တစ်ဦးချင်း ကုန်သွယ်မှု လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် လျှောက်လွှာ နမူနာပုံစံအား ပူးတွဲ (၁) ပါပုံစံဖြင့်လည်းကောင်း၊ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် နမူနာပုံစံအား ပူးတွဲ (၂) ပါပုံစံဖြင့်လည်းကောင်း အသီးသီးဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ပါ သည်။
(ယခင် ITC မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီး (၆) လကျော်သည်အထိ သက်တမ်းတိုး လျောက်ထားခြင်းမပြုပါက ၎င်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်များ ဖျက်သိမ်းကြောင်း သတ်မှတ်ထားခြင်းအား ဖြေလျော့သည့်အနေဖြင့် ဝန်ကြီးဌာန (EC) (၂၆/၂၀၁၅) (၅-၁၀-၂၀၁၅)ခွင့်ပြုချက်အရ ITC ကတ်များ သက်တမ်း တိုးလျောက်ထားလာပါက မူလသက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်နေ့မှစ၍ သက်တမ်းတိုးလျောက်ထားပြီး သက်ဆိုင်ရာ ငွေစာရင်းသို့ သက်တမ်းတိုးကြေး ပေးသွင်းမည့်နေ့ ကြားကာလအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့်သက်တမ်းတိုးကြေးများအား လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေစာရင်း သို့ ပေးသွင်းဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုသွားရန် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။)
၁၅။ ITC ကတ်ဖြင့်ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်ဆောင်ရွက်သူများအား နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုနည်းလမ်း (ကျပ်ငွေကြေး)ဖြင့်ခွင့်ပြုသည့် ပစ္စည်းများအား တင်ပို့၊တင်သွင်းခွင့်ပြုပါသည်။ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန် ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီး ဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ရုံး၏ ၂၈-၂-၂၀၁၃ ရက်စွဲပါအမိန့်ကြော်ငြာ စာ အမှတ် (၁၆/၂၀၁၃)ဖြင့် ပို့ကုန်ပစ္စည်း (၁၅၂)မျိုး H.S Code (၉၈၃)လိုင်း၊ သွင်းကုန်ပစ္စည်း(၁၆၆)မျိုး H.S Code(၂၀၇၉)လိုင်းတို့အား စီးပွား/ကူးသန်းဝန်ကြီးဌာနတွင် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် လိုင်စင် လျှောက်ထားရ ယူရန်မလိုဘဲ တင်ပို့၊တင်သွင်း ခွင့်ပြုခဲ့ပြီး အဆိုပါလိုင်စင်မလိုသည့် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်ပစ္စည်း များအား ITC ဖြင့် ဆောင်ရွက်သူများကိုပါ တင်ပို့၊ တင်သွင်းခွင့်ပြုပါသည်။
၁၆။ ခွင့်ပြုပေးမည့် ပို့ကုန်ပစ္စည်းများ
Automatic Licensing စနစ်အရ ကျပ်ဖြင့် တင်ပို့ခွင့်ပြုထားသော ပို့ကုန် ပစ္စည်းများ (၁၆၀)မျိုး
၁၇။ ခွင့်ပြုပေးမည့် သွင်းကုန်ပစ္စည်းများ
Automatic Licensing စနစ်အရ ကျပ်ဖြင့် တင်သွင်းခွင့်ပြုထားသော သွင်းကုန်ပစ္စည်းများ အားလုံး (၂၄၂)မျိုး
ပြည်တွင်း ကြက်သွန်နီဈေးနှုန်း ကျဆင်းစေရန်နှင့် ကြက်သွန်နီကို လုပ်ငန်းရှင် များ လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ တင်သွင်းနိုင်ရန်အတွက် ၄-၁၂-၂၀၁၅ ရက်နေ့မှစ၍ ITC ကတ်ဖြင့် ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်
၁၈။ (၄-၅-၂၀၁၆) ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ဝန်ကြီးဌာန စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီၤ (၂/ ၂၀၁၆) ကြိမ် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ
ပို့ကုန်/သွင်းကုန်လိုင်စင်လျောက်ထားမှုများကို တစ်နေ့လျင် တစ်ကြိမ်ကျပ် ၃၀၀၀၀၀ိ/- တန်ဖိုးဖြင့် (၅)ရက်စာ တစ်ကြိမ်တည်း ကျပ်သိန်း (၁၅၀) ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။
၁၉။ ၁၆-၉-၂၀၁၆ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ဝန်ကြီးဌာန စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီၤ (၁၃ / ၂၀၁၆) ကြိမ် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ
ပို့ကုန်သွင်းကုန်လိုင်စင်သက်တမ်းအား (၁၄) ရက်
ယခင်ခွင့်ပြုပစ္စည်းများ အပြင် ပို့ကုန် (၄) မျိုး ၊ သွင်းကုန် (၄၆)မျိုး
၂၀။ ၂၅-၁၀-၂၀၁၆ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ဝန်ကြီးဌာန စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီၤ (၁၅/ ၂၀၁၆) ကြိမ် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ
ITC ကတ်လျောက်ထားရာတွင် တင်ပြရသည့် နယ်စပ်ကုန်သည်အသင်းဝင်ကတ်အား ပူးတွဲတင်ပြလျောက်ထားရန်မလိုဘဲ ဖြေလျော့ဆောင်ရွက်ရန် ခွင့်ပြုခဲ့။
၂၁။ ၂၂-၁၁-၂၀၁၆ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ဝန်ကြီးဌာန စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ် (၁၆/ ၂၀၁၆) ကြိမ် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ
ငရုတ်သီးခြောက်ကိုလည်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ တင်ပို့ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုခဲ့။
၂၂။ နယ်စပ်ဒေသများရှိ လုပ်ငန်းရှင်ငယ်များ တရားဝင် ကုန်သွယ်မှုဆောင်ရွက်လာစေရေး ကြိုး ပမ်းရာတွင် (အထူးသဖြင့် တရုတ်နယ်စပ်မှ) ပြည်တွင်းဝယ်လိုအားရှိသည့် ဆိုင်ကယ်တင်သွင်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ တစ်ဖက်နိုင်ငံမှ ဆိုင်ကယ်တရားမဝင် သယ်ယူနေမှုများရှိသဖြင့် တရားဝင်လမ်းကြောင်း ပေါ်မှ ဆောင်ရွက်လာစေရေးအတွက် ITC ကတ်မှတ်ပုံတင် ဆောင်ရွက်သူများအား ဆိုင်ကယ်တင် သွင်းခွင့်ကို အောက်ပါအတိုင်းဖြေလျော့ ခွင့်ပြုပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၁၇-၆-၂၀၁၆ ရက်နေ့ ကျင်းပ ပြုလုပ်သည့် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေး (၆/၂၀၁၆) သို့ ခွင့်ပြုချက်အရ တင်သွင်းခွင့်ပြုခဲ့ -
ITC ကတ်မှတ်ပုံတင်ထားသူ တစ်ဦး ၊ တစ်ရက်လျင် ဆိုင်ကယ် (၁) စီး တင်သွင်းခွင့်ပြုရန်။
တစ်ဦး တစ်ပါတ်လျင် ဆိုင်ကယ်စီးရေ (၅)စီးအထိ တစ်ကြိမ်တည်းစုဆောင်းတင်သွင်းလို ကလည်း ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုရန်။
နေ့စဉ်ဆိုင်ကယ် တရားမဝင်သယ်ဆောင်နေသည့် ဒေသခံများအား တရားဝင်လမ်း ကြောင်းပေါ်မှ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်လာစေရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်ရေးစခန်းတာဝန်ခံများမှ ရှင်းလင်းစည်းရုံးဆောင်ရွက်ရန်။
ITC မှတ်ပုံတင်၍ ဆိုင်ကယ်တင်သွင်းဆောင်ရွက်သူများအနေဖြင့် ရုံးလုပ်ငန်းလွယ်ကူရှင်း လင်းစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်စေရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန ၊ အကောက်ခွန်ဦးစီး ဌာန၊ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနတို့မှ ဝန်ထမ်းထုတ်နှုတ်၍ သီးခြားတာဝန်ပေးဆောင်ရွက်ရန်။
စမ်းသပ်ကာလ (၁) လ စမ်းသပ်ဆောင်ရွက်ပြီး လုပ်ငန်းတိုးတက် ဆောင်ရွက်နိုင်မှု အပေါ် မူတည်၍ ITC ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုသည့် တန်ဖိုး တစ်ရက်လျင် ကျပ်သိန်း (၃၀) နှုန်းဖြင့် တစ်ပတ်လျင် ကျပ်သိန်း (၁၅၀) ခွင့်ပြုဘောင်အတွင်း စီးရေတိုးမြှင့်၍ ခွင့်ပြုပေးသွားရန်။
ယင်းသို့ ITC ကတ်နှင့် တရားဝင်သွင်းကုန်လိုင်စင် ပြုလုပ်တင်သွင်းခဲ့သော လိုင်စင်အရ အကောက်ခွန်မှ သွင်းကုန်ကြေငြာလွှာ ID လွယ်ကူစွာပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရန်၊ လိုင်စင်နှင့် ID တို့အရ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတွင် မော်တော်ဆိုင်ကယ်မှတ်ပုံ တင် လိုင်စင်ထုတ်ပေးရေး ဆောင်ရွက်စေရန်တို့အား သက်ဆိုင်ရာဌာနများသို့ အကြောင်း ကြားရန်။
နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး စခန်း အသီးသီးအလိုက် တစ်ဦးချင်း ကုန်သွယ်မှု လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင် လက်မှတ် (Individual Trading Card)ဆောင်ရွက်ခွင့် ရှိသော ဒေသခံများ
မူဆယ်၊ လားရှိုး၊ ကျောက်မဲခရိုင်များရှိ ဒေသနေ ပြည်သူများ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း နေထိုင်သူများနှင့် မန္တလေး တိုင်း ဒေသကြီးအတွင်း နေထိုင်သူများ။
မွန်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ဒေသနေ ပြည်သူများ။
တာချီလိတ်၊ ကျိုင်းတုံ၊ မိုင်းဖြတ်၊ မိုင်းဆတ်၊ တောင်ကြီး၊ လင်းခေး၊ လွိုင်လင်ခရိုင်များအတွင်းရှိ ဒေသနေပြည်သူများ။
ဗန်းမော်ခရိုင်အတွင်းရှိ ဒေသနေ ပြည်သူများ။
စစ်တွေခရိုင်၊ မြောက်ဦးခရိုင်၊ ကျောက်ဖြူခရိုင်အတွင်းရှိ ဒေသ
ကွမ်းလုံခရိုင်အတွင်းရှိ ဒေသနေ ပြည်သူများ။
မြစ်ကြီးနားခရိုင်နှင့် မိုးညှင်းခရိုင်အတွင်းရှိ ဒေသနေပြည်သူများ။
မြိတ်နှင့် ထားဝယ်ခရိုင်အတွင်းရှိ ဒေသနေ ပြည်သူများ။
ကော့သောင်းခရိုင်အတွင်းရှိ ဒေသနေ ပြည်သူများ။
ရိဒ်၊ တီးတိန်၊ ကလေးမြို့နယ် အတွင်းရှိ ဒေသနေပြည်သူများ။
ထန်တလန်၊ဟားခါး၊ ဖလမ်းဒေသအတွင်းရှိ ဒေသနေ ပြည်သူများ
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း နေထိုင်သူများနှင့် ရှမ်းပြည် နယ်
(မြောက်ပိုင်း) အတွင်း နေထိုင်သူများ။
ကျိုင်းတုံခရိုင်အတွင်းရှိ(ကျိုင်းတုံ၊မိုင်းခတ်၊မိုင်းယန်း၊မိုင်းပျဉ်း) တာချီလိတ်ခရိုင် အတွင်းရှိ မိုင်းဖြတ်၊ မိုင်းယောင်း) တောင်ကြီးခရိုင်အတွင်းရှိ (တောင်ကြီး၊ ညောင်ရွှေ၊ ဟိုပုံး၊ ဆီဆိုင်၊ ကလော၊ ပင်းတယ၊ ရွာငံ၊ ရပ်စောက်၊ ပင်လောင်း၊ဖယ်ခုံ)၊ လင်းခေးခရိုင် အတွင်းရှိ (လင်းခေး၊ မိုးနဲ၊ မိုင်းပန်၊ မောက်မယ်) လွိုင်လင် ခရိုင်အတွင်းရှိ (လွိုင်လင်၊ လဲချား၊ နမ့်စန်၊ ကွန်ဟိန်း၊ ကျေးသီး၊ မိုင်းကိုင်၊ မိုင်းရှူး)) မြို့နယ်များရှိ ဒေသနေပြည်သူများ။
မြစ်ကြီးနားခရိုင်၊ မိုးညှင်းခရိုင်အတွင်းရှိ ဒေသနေပြည်သူများ။
ရက်စွဲ။ ၂၀၁ ခုနှစ်၊ လ ရက်
အကြောင်းအရာ။ တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် လျှောက်ထားခြင်း
၁။ ကျွန်တော်/ ကျွန်မ ဦး/ဒေါ် ………………………..၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် …………………………. သည် …………………… နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ တစ်ဆင့် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လိုပါ၍ တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ထုတ်ပေးပါရန် အောက်ပါစာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများ ပူးတွဲတင်ပြ လျှောက်ထားအပ်ပါသည် -
(က) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးမှတ်ပုံတင်ကတ်ပြား (မူရင်း/မိတ္တူ)။
( ခ ) ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ထောက်ခံချက် (မူရင်း)။
( ဂ ) အိမ်ထောင်စုဇယား ပုံစံ (၆၆/၆) (မူရင်း/မိတ္တူ)။
(ဃ) သက်ဆိုင်ရာရဲစခန်း၏ပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်းနှင့်အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ကြောင်း ထောက်ခံချက်(မူရင်း)
( င ) သက်ဆိုင်ရာ နယ်စပ်ကုန်သည်အသင်းဝင်ကတ်ပြား (မူရင်း/မိတ္တူ)။
( စ ) ပတ်စပို့အရွယ် ဓာတ်ပုံ (၃) ပုံ
၂။ ကျွန်တော်/ ကျွန်မ ……………………………… တို့ ပူးတွဲတင်ပြသော အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းများနှင့် တင်ပြချက်များ မှန်ကန်ကြောင်းနှင့် ချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လိုက်နာမည်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံကတိပြုပါသည်။
၁။ လုပ်ငန်းရှင်အမည် …………………………………………………...........
၂။ နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်အမှတ် …………………………………………………...........
၃။ အဘအမည် ………………………………………………………..
၄။ မွေးသက္ကရာဇ် ………………………………………………………..
၅။ နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ …………………………………………………...........
၆။ ကုန်သည်အသင်းဝင်အမှတ်နှင့် ရက်စွဲ ( ) ( )
၇။ ဆက်သွယ်ရမည့် ဖုန်းနံပါတ်၊ ဖက်စ်နံပါတ်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ …………………………....
၈။ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်သက်တမ်း ( - - ) မှ ( - - ) ထိ
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ( ကိုယ်စား )
သက်တမ်းတိုးမြှင့်ကာလ ခွင့်ပြုသူအမည် နှင့် လက်မှတ်
….…………… မှ …………………. ထိ …………………………….
ဤ တစ်ဦးချင်း ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ကိုင်ဆောင်ထားသူသည် အောက်ပါ စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရမည် -
(က) မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို လွှဲပြောင်းခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း မပြုရ။
( ခ ) သတ်မှတ်ထားသော စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ မူဝါဒလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရမည်။
( ဂ ) နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုနည်းလမ်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုထားသော ပို့ကုန်သွင်းကုန်ပစ္စည်း များကိုသာ တင်ပို့တင်သွင်းခွင့် ရှိသည်။
(ဃ) တားမြစ်ကန့်သတ်ထားသော ကုန်ပစ္စည်းများကို တင်ပို့တင်သွင်းခြင်း မပြုရ။
Read more about ITC မှတ်ပုံတင်ကတ်အကြောင်း
Tue, 12/01/2015 - 12:58 -- dccaadmin
ITC ဖြင့် အမှန်တင်ပို့၊ တင်သွင်း ဆောင်ရွက်မှု
ပို့ကုန်တန်ဖိုး သွင်းကုန်တန်ဖိုး ကုန်သွယ်မှုပမာဏ
၁ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ (၂၁-၁၁-၂၀၁၂ မှ ၃၁-၃-၂၀၁၃) ၂၉၂ ၅၉၅၃၉၈၃၃.၀၀၀ ၆၇၈၀၄၁၆၄၆.၀၀၀ ၇၃၇၅၈၁၄၇၉.၀၀၀
၃၁၅ ၂၈၃၄၇၄၉၉၃၃.၉၆၀ ၆၅၃၇၉၅၃၀၄၈.၁၇၈ ၉၃၇၂၇၀၂၉၈၂.၁၃၈
(၁-၄-၂၀၁၅ မှ ၂၀-၁၁-၂၀၁၅) ထိ ၁၁၆ ၁၈၇၈၄၉၉၄၀၆.၆၁၄ ၂၃၆၈၄၄၀၉၁၆.၃၁၈ ၄၂၄၆၉၄၀၃၂၂.၉၃၂
၉၈၄ ၅၆၁၅၉၈၂၈၂၆.၅၇၄ ၁၅၃၉၇၇၆၀၀၁၀.၈၇၆ ၂၁၀၁၃၇၄၂၈၃၇.၄၅၀
Read more about ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ITC ကတ်ထုတ်ပေးမှုနှင့် ITC ကတ်ဖြင့် အမှန်တင်ပို့/တင်သွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေ
Wed, 12/17/2014 - 12:31 -- dccaadmin
၁။ တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို အသက်(၁၈)နှစ်ပြည့်ပြီးသူ နိုင်ငံသား တိုင်း လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်လျှောက်ထားရာတွင် တင်ပြရမည့် အထောက် အထားများ
( ခ )တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မှု လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးမှု မှတ်တမ်းစာအုပ်အား သက်ဆိုင်ရာ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးစခန်းအလိုက် စနစ်တကျ မှတ်တမ်းထားရှိရ ပါမည်။
( စ) ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး စခန်းများအလိုက် ခွင့်ပြုထားသော တစ်ဦးချင်း ကုန်သွယ်မှု လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင် လက်မှတ် ထုတ်ပေးထားရှိမှု အခြေအနေအား ကူးသန်းရောင်း ဝယ်ရေးနှင့် စားသုံးသူရေးရာ ဦးစီးဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲရေးေ ကာ်မ တီသို့တင်ပြ အတည်ပြု ပါမည်။
( ဂ ) မှတ်ပုံတင်ကြေးကို ကျပ် ၅၀ဝဝိ/ သတ်မှတ်ပါမည်။
(ဃ) မှတ်ပုံတင် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ကြေးကို (၁) နှစ်အတွက် ကျပ် ၅၀ဝဝိ/ သတ်မှတ် ပါမည်။
၆။ တစ်ဦးချင်း ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်းကို သက်တမ်း မကုန်ဆုံးမီ (၁)လ ကြိုတင် သက်တမ်းတိုးမြှင့် ခွင့်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်း အားသက်တမ်း ကုန်ဆုံးပြီးနောက် မှလျှောက်ထားလျင် ကာလအလိုက် အောက်ပါ ဒဏ်ကြေးများကို ပေးဆောင်ရပါမည် -
(က )ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက် ထားမှုကို လူတစ်ဦး တစ်ရက်လျှင် ကျပ် ၂၀ဝဝဝ၀ိ/ (ကျပ်နှစ် ဆယ်သိန်း) နှုန်းဖြင့် (၅)ရက်စာ တစ်ကြိမ်တည်း အများဆုံးကျပ်သိန်း (၁၀ဝ)ဖြင့် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုပါမည်။
( ဂ ) ပို့ကုန် လိုင်စင်များကို နေ့ချင်းပြီးထုတ်ပေးသွားပါမည်။ လက်ရှိလိုင်စင်ထုတ်ပေးသည့် နည်းစနစ်အတိုင်း အုပ်စုလိုက်စနစ်ဖြင့် ထုတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပို့ကုန်လိုင်စင် နံပါတ်စဉ်အား စခန်းအလိုက်၊ အုပ်စုအလိုက်၊ အမှတ်စဉ်တပ်၍ ထုတ်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
( ဂ ) သွင်းကုန်လိုင်စင် များကို နေ့ချင်းပြီးထုတ်ပေးသွားပါမည်။ လက်ရှိလိုင်စင်ထုတ်ပေးသည့် နည်းစနစ်အတိုင်း အုပ်စုလိုက်စနစ်ဖြင့် ထုတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ သွင်းကုန် လိုင်စင်နံပါတ်စဉ်အား စခန်းအလိုက်၊ အုပ်စုအလိုက်၊ အမှတ်စဉ် တပ်၍ ထုတ်ပေး သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
(ဃ) တစ်ဖက်နိုင်ငံမှ တင်သွင်းမည့် စားသောက်ကုန် ပစ္စည်းများအတွက် ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဌာန (FDA)၏ ထောက်ခံချက်ပါရှိသော ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများသာ သွင်းကုန်လိုင်စင်ဖြင့် တင်သွင်းခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။
စဉ် စခန်းအမည် စတင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည့်ဒေသခံများ
(က) တမူးစခန်း (၂၁-၁၁-၂၀၁၂) စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိဒေသနေ ပြည်သူများ။
( ခ ) မူဆယ်စခန်း (၁-၁၂-၂၀၁၂) မူဆယ်၊ လားရှိုး၊ ကျောက်မဲခရိုင်များ အတွင်း ရှိ ဒေသနေပြည်သူများ။
( ဂ ) မြဝတီစခန်း (၁-၁၂-၂၀၁၂) မွန်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ဒေသနေပြည်သူများ။
(ဃ) တာချီလိတ်စခန်း (၁-၁၂-၂၀၁၃) တာချီလိတ်၊ ကျိုင်းတုံ၊ မိုင်းဖြတ်၊ မိုင်းဆတ်၊ တောင်ကြီး၊ လင်းခေး၊ လွိုင်လင်ခရိုင်များ အတွင်းရှိ ဒေသနေပြည်သူများ။
( င ) လွယ်ဂျယ်စခန်း (၁-၃-၂၀၁၃) ဗန်းမော်ခရိုင်အတွင်းရှိ ဒေသနေပြည်သူများ။
( စ ) စစ်တွေစခန်း (၁-၄-၂၀၁၃) စစ်တွေခရိုင်၊မြောက်ဦးခရိုင်၊ ကျောက်ဖြူခရိုင် အတွင်းရှိ ဒေသနေပြည်သူများ။
(ဆ) မောင်တောစခန်း (၁-၄-၂၀၁၃) ဘူးသီးတောင်၊မောင်တောမြို့နယ် အတွင်းရှိ ဒေသနေပြည်သူများ။
( ဇ ) ချင်းရွှေဟော်စခန်း (၂၂-၄-၂၀၁၃) ကွမ်းလုံခရိုင်အတွင်းရှိဒေသနေပြည်သူများ။
( ဈ ) ကန်ပိုက်တီးစခန်း (၂၂-၄-၂၀၁၃) မြစ်ကြီးနားခရိုင်နှင့် မိုးညှင်းအတွင်းရှိဒေသ နေပြည်သူများ။
(ည) မြိတ်စခန်း (၂၂-၄-၂၀၁၃) မြိတ်နှင့်ထားဝယ်ခရိုင် အတွင်းရှိဒေသနေ ပြည်သူများ။
( ဋ ) ကော့သောင်းစခန်း (၂၂-၄-၂၀၁၃) ကော့သောင်းခရိုင် အတွင်းရှိဒေသနေပြည်သူ များ။
( ဌ ) ရိဒ်စခန်း (၂၂-၄-၂၀၁၃) ရိဒ်၊ တီးတိန်၊ ကလေးမြို့နယ် အတွင်းရှိ ဒေသ နေပြည်သူများ။
( ဍ ) ထန်တလန်စခန်း (၂၂-၄-၂၀၁၃) ထန်တလန်၊ ဟားခါး၊ ဖလမ်းဒေသအတွင်းရှိ ဒေသနေပြည်သူများ။
( ဎ ) မောတောင်စခန်း (၁-၇-၂၀၁၃) မြိတ်ခရိုင်အတွင်းရှိ အတွင်းရှိ ဒေသနေ ပြည်သူများ။
(ဏ) ထီးခီးစခန်း (၁-၇-၂၀၁၃) ထားဝယ်ခရိုင်အတွင်းရှိ ဒေသနေပြည်သူများ။
( တ) မန္တလေးတိုင်း (၁-၄-၂၀၁၄) မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ဒေသနေ
(ထ) ရှမ်းပြည်နယ် (၅-၅-၂၀၁၄) ကျိုင်းတုံခရိုင်အတွင်းရှိ (ကျိုင်းတုံ၊ မိုင်းခတ်၊
(အရှေ့ပိုင်း)ကျိုင်းတုံ မိုင်းယန်း၊ မိုင်းပျဉ်း) ကျိုင်းတုံ(ရုံးခွဲ) မြို့နယ်
များနှင့်တာချီလိတ် ခရိုင်အတွင်းရှိ (မိုင်းဖြတ်၊ မိုင်းယောင်း) တောင်ကြီးခရိုင်အတွင်းရှိ (တောင်ကြီး၊ ညောင်ရွှေ၊ ဟိုပုံး၊ ဆီဆိုင်၊ ကလော၊ ပင်းတယ၊ ရွာငံ၊ ရပ်စောက်၊ ပင်လောင်း၊ ဖယ်ခုံ)၊ လင်းခေးခရိုင်အတွင်းရှိ (လင်းခေး၊ မိုးနဲ မိုင်းပန်၊ မောက်မယ်) လွိုင်လင်ခရိုင်အတွင်းရှိ (လွိုင်လင်၊ လဲချား၊ နမ့်စန်၊ ကွန်ဟိန်း၊ ကျေးသီး၊ မိုင်းကိုင်၊ မိုင်းရှူး) ) မြို့နယ်များရှိ ဒေသနေပြည်သူ များ ။
( ဒ ) ကချင်ပြည်နယ် (၁၅-၁၀-၂၀၁၄) ကချင်ပြည်နယ်( မြစ်ကြီးနားခရိုင်၊ မိုးညှင်း
မြစ်ကြီးနား ခရိုင်) များအတွင်းရှိ ဒေသနေပြည်သူများ။
Read more about ITC မှတ်ပုံတင်ကဒ်အကြောင်း